​शिघ्र स्खलन हुन्छ भने लामो समय आनन्द लिन यसो गर्नुहोस् | www.aagopani.com Halloween Costume ideas 2015
​शिघ्र स्खलन हुन्छ भने लामो समय आनन्द लिन यसो गर्नुहोस्
दुई मिनेट, त्यस पछि शिथील ? लामो समय आनन्द प्राप्त गर्न मात्र अभ्यास र तरिकाको खाँचो छ । हामी यौनको मामलामा गलत मानसिकतालाई पछ्याइरहेका छौँ । महिलहरुमा यौन चाहाना कम हुन्छ, यो सोचाई पुरातनवादी सोच बाहेक अरु केहि होइन । यौन जीवनलाई राम्रो बनाउन चाहानु हुन्छ भने यस्ता मानसिकताबाट टाढा रहनुहोस् । महिलाहरु पुरुषभन्दा बढी शक्तिसाली यौनको चाहाना राख्छन् । महिलाहरुले यौनलाई कम प्राथमीकतामा राख्छन् भन्नु भयो भने त्यो गलत हुन सक्छ । किनकी धेरै महिलाहरु यौनमा सक्रिय रहन्छन् । यसको चाहाना राख्छन् । सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा पुरुषका लागि यौन शारिरीक अनुभव मात्र हो । तर, महिलाको लागि त्यो भन्दा बढी हो । शरिरसँगै भावनालाई पनि बलीयो गरी जोड्ने साधन हो । नारीत्वको भावना जति राम्ररी बुझ्यो उति नै पुरुषत्वले यौन जीवनलाई आनन्दमय बनाउन सक्छ । यौन सन्तुष्टिको शक्ति ठूलो हुन्छ । राम्रो सन्तुष्टि पाएमा त्यस्तै सन्तुष्टिका लागि तपाईँलाई सम्झने गर्छन् ।
यौन सन्तुष्ट दिलाउन नसकेमा महिलाले पुरुषलाई कुकुरको जस्तो व्यवहार गर्न पनि पछि पर्दैनन् । त्यसैले यौन लिला लामो र सुन्तुष्टिको बाटोमा लैजान केहि कुराहरुको अभ्यास गरेर सुधार गर्न सकिन्छ । यो लेखमा म शिघ्र स्खलनको समस्या सुधार गरी लामो यौन लीलामा संलग्न हुन सहयोग पुग्ने पाँच तरिका बताउँछु ।
१. केहि गहिरो स्वास लिनुहोस्
धेरै मानीसहरु यौन सम्पर्कको समयमा शिघ्र स्खलन हुने हो कि भनेर डराउँछन् । यस्तो डर र भयले तनाव जन्मीन्छ । तनावले मानीसको पसिना निकाल्छ । अनी लामो दौड गरेजस्तै छोटो र तिव्र रुपमा स्वास फेर्न थाल्छ । दुर्भाग्यबस यो नै शिघ्र स्खलनको कारण बन्छ । त्यसैले दश पटक जति लामो स्वास लिनुहोस । तनावबाट मुक्ती दिलाउन मद्धत मिल्नेछ । तपाईको डरलाई भगाउनेछ । यो अभ्यास गर्दै जानुहोस् तपाईसँगै तपाईको जोडिले पनि आनन्दको महसुस गर्नेछिन् । यौन लिला पनि लामो हुनेछ ।
२.नियन्त्रण गर्नुहोस् ।
मानसिकता परिर्वतन गर्नुहोस् । यौन गतिविधिबारेमा चिन्ता नगर्नुहोस् । तिव्र उत्तेजनामा हुनुहुन्छ भने लिङ्गलाई दह्रो गरि समाउनुहोस् । लाज र तनाव नमान्नुहोस् । यो अभ्याससँगै नसमाएरै उत्तेजना नियन्त्रण गर्ने अभ्यास पनि गर्नुहोस । पिसाब फेर्दा बिच बिचमा रोक्ने प्रयासले पनि यो अभ्यासमा सघाउ पुर्याउन सक्छ । यो अभ्यासले शिघ्र स्खलनको समस्या कम हुँदै जान्छ ।
३. यौन सम्पर्क पहिला पिसाब गर्नुहोस् ।
यो एकदमै सामान्य तरिका हो शिघ्र स्खलन कम गर्ने । तर, यहि सामान्य कुरा मानीसले घरिघरी बिर्सीरहन्छन् । त्यसैले यौन सम्पर्क गर्नु पहिला पिसाब गर्न नभुल्नुहोला । यसले तपाईँको यौनाङ्गमा हुने दबाब कम हुन्छ । जसले शिघ्र स्खलनलाई प्राकृतिक रुपमा कम गरेर यौन लिला लामो बनाउन सकिन्छ ।
४. जिब्रोलाई मुखको टुप्पोतर्फ पुर्याउनुहोस् ।
यो तरिका तपाईँलाई काम न काजको जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यसले पक्कै काम गर्छ । जीब्रोलाई मुखको टुप्पोतर्फ लैजादा तपाईँको ध्यान भंग हुन पुग्छ । स्खलित हुन लाग्दा ध्यान अर्कोतर्फ मोडिदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ । फेरी यौन गतिविधिमै समावेश हुन पनि सजीलै सकिन्छ । त्यसैले यो विधि पनि तपाईँको लागि सहयोगि हुन सक्छ ।
५. दोश्रो चरण सुरु गर्नुहोस् ।
यति गर्दा गर्दै पनि विफल हुनुभयो भने दोश्रो चरण सुरु गर्नुहोस् । यस्तो समस्यालाई महिलाले पनि बुझेका हुन्छन् । दोश्रो चरणको यौनले महिलालाई पक्कै सन्तुष्टि दिन सक्नुहुनेछ । गल्तीहरुबाट नै सिक्न सकिने हो त्यसैले चिन्ता भन्दा पनि शिघ्र स्खलन पछि दोश्रो चरणको यौन लिला सुरु गर्न पछि नपर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
यी पाँच तरिका यसको सुरुवात मात्र हो । यस्ता थुप्रै विधि र तरिकाहरु हुन्छन् । अभ्यास गर्दै सुधार गर्दै जानुहोस् । तपाईँको यौन लिला लामो हुनेछ ।